ဒီနှစ်ထဲ သယ်မလာသင့်တော့တဲ့ gym အယူအဆမှားများ -
Posted on January 11, 2019 January 11, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ပိန်မှလှတာ၊ အစားမစားဘဲ နေမှ ဝိတ်ကျမှာ စတဲ့အယူအဆတွေက မှန်ရဲ့လား????
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ ဆရာများသားသေ အကြံဉာဏ်ပေါင်း တစ်သိန်းခြောက်သောင်းလောက်ဝိုင်းပေးပြီး အခုချိန်ဘယ်ဟာအမှန်၊ ဘယ်ဟာအမှားမှန်းသေချာမသိသေးတဲ့ယောင်းတွေ ချီးယားစ်ပါနော်။ ၂၀၁၉ လည်း ရောက်နေပြီ အခုထိ ထိုင်နေရာက မထသေးဘူး။ ငိုနေပါပြီ ချိမရေ :’) အဲ့တော့ မဆော့ရသေးမယ့်အတူတူ မှားနိုင်ခြေရှိနေသေးတဲ့ အယူအဆတွေကို ထပ်ပြောဦးမယ်။ သိချင်သွားပြီမလား??? ဆက်ဖတ်လိုက်ပါတော့ယူ…
အင်စတာဂရမ်က ကောင်မလေးပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ပိန်ပြီးသွယ်လျနေမှ ကျန်းမာတာဆိုတဲ့အသိကို ခေါင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပါတော့နော်။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က မျိုးရိုးဗီဇ၊ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်ပုံတွေအပေါ် မူတည်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံလေးတွေက မတူပါဘူးနော်။ ကိုယ်ကပိန်မနေလို့ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျစရာလည်း တစ်စိမှ မရှိပါဘူး။ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်ရှိနေရင်၊ သန်စွမ်းနေရင် ဒါကကျန်းမာတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပိန်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ပါနဲ့၊ ပိန်ဖို့ဝိတ်မလျှော့ပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်ပဲ လေ့ကျင့်ခန်းကိုပုံမှန်လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးဖြစ်စေမယ့် အစားအသောက်တွေကို ပုံမှန်စားပါ။
Related Article >>>ားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်စားရလို့ဝိတ်မကျတာဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေနားလိုက်တော့…
အစာမစားဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ဝိတ်ပိုကျတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်လည်း မစား၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်း မစားနဲ့ဆိုရင်တော့ ချိမ အစာအိမ်ဖြစ်တော့မယ်နော်။ ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေး ယောင်းရဲ့။ အများကြီးစားရင် ဝိတ်တက်စေသလို လုံးဝမစားရင်လည်း မကျန်းမာတဲ့အပြင် ရောဂါပါပိုတိုးလာဦးမယ်။ နောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ နှင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အားအင်တွေကို လောင်ကျွမ်းစေတာဖြစ်တဲ့အတွက် လောင်ကျွမ်းစရာမရှိတဲ့အခါ အားမရှိဘဲ အလေးတွေကို မ,မနိုင်တာမျိုး၊ အမောမခံနိုင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာမစားဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အကျင့်ရှိရင်တော့ ဖျောက်ပေးပါလို့။ (မစားဘဲနေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ :P)
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က နာလေ ကောင်းလေပဲ။
ပယ်သူပြောတာလဲ အဲဒါ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ဗလနဲ့ လူကြီးတွေ တအီးအီး တအားအားအော်၊ အံကြီးကြိတ်ပြီး အလေးတွေ မ,နေတယ်ဆိုတာ နာလို့မဟုတ်ဘူး။ မာဆယ်တွေထွက်အောင် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အားအကုန်လုံးကို နားထင်ကြောတွေ ထောင်နေအောင် ထုတ်သုံးရတာမို့ အသံထွက်တာပါ။ အဲဒါကြောင့် အကယ်၍ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုက နာနေပြီဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုမှားနေပါပြီ။
ဒါကလေ မှန်လည်းမှန်သလို မှားလည်းမှားတယ်လို့ ပြောရမယ့် အနေအထားပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုံမှန်လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ပြေးနိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ခုလောက်ပဲ ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတယ်လို့ ဆိုပေမဲ့ မနိုင်ဝန်ကြီးကို ထမ်းပြီး ဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ စွတ်ပြေးရင်တော့ ခြေလှမ်းမှားသွားတဲ့အချိန် ဒူးခေါင်းမှာ ဒဏ်ဖြစ်တတ်ပြီး ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့နှုန်းကို တိုးချင်ရင်တော့ အများကြီး တန်းတိုးချလိုက်တာထက် ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတာက ယောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ပိုပြီးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
Related Article >>> နှစ်သစ်မှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှမလုပ်ရင် ယောင်းဝိတ်ကျဖို့လမ်းမမြင်တော့ပါဘူး…
ဒါတစ်ခုတော့ မှန်တယ်သလား။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အလုပ်ပေးရုံတင်မကဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ဦးနှောက်ပိုပါ အလုပ်ပေးတာမို့ ဉာဏ်လည်းပိုကောင်းစေပါတယ်တဲ့။ အဓိကအားဖြင့် ဦးနှောက်ရဲ့မှတ်နိုင်စွမ်းကို ပိုပြီးကောင်းစေတာမို့ အသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူတဲ့အခါ ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်းနေအရွယ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးတွေ အနေနဲ့လည်း စာပဲ ဖိလုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း အချိန်လေးအနည်းငယ် ပေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်သင့်ပါတယ်နော်။
ဒီအချက်လေးတွေကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ အားကစားလုပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မမှားသင့်တော့တဲ့ အချက်လေးတွေပါ။ (နောက်ဆုံးတစ်ချက်က လွဲပြီးပေါ့နော်။) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အားထုတ်လိုက်ရတဲ့ အတိုင်းအတာကိုလိုက်ပြီး သူသူကိုယ်ကိုယ်ကတော့ ရလဒ်ထွက်ချင်မှာပဲလေ။ အဲဒါကြောင့် Gym မဆော့ရသေးရင်လည်း ဒီစာလေးဖတ်ပြီး သွားဆော့ကြပါ ချိမတို့ရေးးး။
References : active, experiencelife
ပိနျမှလှတာ၊ အစားမစားဘဲ နမှေဝိတျကမြှာ စတဲ့အယူအဆတှကေ မှနျရဲ့လား????
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈယောကျတဈပေါကျနဲ့ ဆရာမြားသားသေ အကွံဉာဏျပေါငျး တဈသိနျးခွောကျသောငျးလောကျဝိုငျးပေးပွီး အခုခြိနျဘယျဟာအမှနျ၊ ဘယျဟာအမှားမှနျးသခြောမသိသေးတဲ့ယောငျးတှေ ခြီးယားဈပါနျော။ ၂၀၁၉ လညျး ရောကျနပွေီ အခုထိ ထိုငျနရောက မထသေးဘူး။ ငိုနပေါပွီ ခြိမရေ :’) အဲ့တော့ မဆော့ရသေးမယျ့အတူတူ မှားနိုငျခွရှေိနသေေးတဲ့ အယူအဆတှကေို ထပျပွောဦးမယျ။ သိခငျြသှားပွီမလား??? ဆကျဖတျလိုကျပါတော့ယူ…
အငျစတာဂရမျက ကောငျမလေးပုံတှကေိုကွညျ့ပွီး ပိနျပွီးသှယျလနြမှေ ကနျြးမာတာဆိုတဲ့အသိကို ခေါငျးထဲက ထုတျလိုကျပါတော့နျော။ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျက မြိုးရိုးဗီဇ၊ ခန်ဓာကိုယျ တညျဆောကျပုံတှအေပျေါ မူတညျပွီး ခန်ဓာကိုယျပုံစံလေးတှကေ မတူပါဘူးနျော။ ကိုယျကပိနျမနလေို့ဆိုပွီး စိတျဓာတျကစြရာလညျး တဈစိမှ မရှိပါဘူး။ ဖတျြဖတျြလတျလတျရှိနရေငျ၊ သနျစှမျးနရေငျ ဒါကကနျြးမာတာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ပိနျဖို့လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျပါနဲ့၊ ပိနျဖို့ဝိတျမလြှော့ပါနဲ့။ ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့အတှကျပဲ လကေ့ငျြ့ခနျးကိုပုံမှနျလုပျပွီး ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးဖွဈစမေယျ့ အစားအသောကျတှကေို ပုံမှနျစားပါ။
Related Article >>>ားသောကျဆိုငျတှမှော ဝယျစားရလို့ဝိတျမကတြာဆိုတဲ့ ဆငျခွတှေနေားလိုကျတော့…
အစာမစားဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျ ဝိတျပိုကတြယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျခငျလညျး မစား၊ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပွီးတဲ့အခြိနျကရြငျလညျး မစားနဲ့ဆိုရငျတော့ ခြိမ အစာအိမျဖွဈတော့မယျနျော။ ဘယျအရာမဆို တနျဆေးလှနျဘေး ယောငျးရဲ့။ အမြားကွီးစားရငျ ဝိတျတကျစသေလို လုံးဝမစားရငျလညျး မကနျြးမာတဲ့အပွငျ ရောဂါပါပိုတိုးလာဦးမယျ။ နောကျပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ နှငျးတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အားအငျတှကေို လောငျကြှမျးစတောဖွဈတဲ့အတှကျ လောငျကြှမျးစရာမရှိတဲ့အခါ အားမရှိဘဲ အလေးတှကေို မ,မနိုငျတာမြိုး၊ အမောမခံနိုငျတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစာမစားဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့ အကငျြ့ရှိရငျတော့ ဖြောကျပေးပါလို့။ (မစားဘဲနမှောတော့ မဟုတျပါဘူးလေ :P)
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျက နာလေ ကောငျးလပေဲ။
ပယျသူပွောတာလဲ အဲဒါ။ ရုပျရှငျထဲမှာတှရေ့တဲ့ ဗလနဲ့ လူကွီးတှေ တအီးအီး တအားအားအျော၊ အံကွီးကွိတျပွီး အလေးတှေ မ,နတေယျဆိုတာ နာလို့မဟုတျဘူး။ မာဆယျတှထှေကျအောငျ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အားအကုနျလုံးကို နားထငျကွောတှေ ထောငျနအေောငျ ထုတျသုံးရတာမို့ အသံထှကျတာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ အကယျ၍ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတဈခုခုက နာနပွေီဆိုရငျတော့ တဈခုခုမှားနပေါပွီ။
ဒါကလေ မှနျလညျးမှနျသလို မှားလညျးမှားတယျလို့ ပွောရမယျ့ အနအေထားပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုံမှနျလူတဈယောကျ အနနေဲ့ ပွေးနိုငျတဲ့ အနအေထားတဈခုလောကျပဲ ပွေးမယျဆိုရငျတော့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးတယျလို့ ဆိုပမေဲ့ မနိုငျဝနျကွီးကို ထမျးပွီး ဖွဈခငျြဇောနဲ့ စှတျပွေးရငျတော့ ခွလှေမျးမှားသှားတဲ့အခြိနျ ဒူးခေါငျးမှာ ဒဏျဖွဈတတျပွီး ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ အကယျ၍ ကိုယျလုပျနိုငျတဲ့နှုနျးကို တိုးခငျြရငျတော့ အမြားကွီး တနျးတိုးခလြိုကျတာထကျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးတိုးတာက ယောငျးရဲ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ ပိုပွီးကောငျးမှနျစပေါတယျ။
Related Article >>> နှဈသဈမှာ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှမှေမလုပျရငျ ယောငျးဝိတျကဖြို့လမျးမမွငျတော့ပါဘူး…
ဒါတဈခုတော့ မှနျတယျသလား။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက ကိုယျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို အလုပျပေးရုံတငျမကဘဲ ကိုယျ့ရဲ့ဦးနှောကျပိုပါ အလုပျပေးတာမို့ ဉာဏျလညျးပိုကောငျးစပေါတယျတဲ့။ အဓိကအားဖွငျ့ ဦးနှောကျရဲ့မှတျနိုငျစှမျးကို ပိုပွီးကောငျးစတောမို့ အသဈတှကေို လလေ့ာသငျယူတဲ့အခါ ပိုပွီးအထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြောငျးနအေရှယျ ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူလေးတှေ အနနေဲ့လညျး စာပဲ ဖိလုပျနတောမြိုးမဟုတျဘဲ လကေ့ငျြ့ခနျးကိုလညျး အခြိနျလေးအနညျးငယျ ပေးပွီးတော့ပဲဖွဈဖွဈ လုပျသငျ့ပါတယျနျော။
ဒီအခကျြလေးတှကေတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ၊ အားကစားလုပျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ထပျမမှားသငျ့တော့တဲ့ အခကျြလေးတှပေါ။ (နောကျဆုံးတဈခကျြက လှဲပွီးပေါ့နျော။) ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျအားထုတျလိုကျရတဲ့ အတိုငျးအတာကိုလိုကျပွီး သူသူကိုယျကိုယျကတော့ ရလဒျထှကျခငျြမှာပဲလေ။ အဲဒါကွောငျ့ Gym မဆော့ရသေးရငျလညျး ဒီစာလေးဖတျပွီး သှားဆော့ကွပါ ခြိမတို့ရေးးး။
Tagged busted, Fitness, gym, myths, tips
Posted on March 20, 2018 Author Hnin Ei Oo
အဓိကအဆီစုတတ်တဲ့ ဗိုက်၊ ခါး၊ ပေါင်တံ၊ လက်မောင်းတွေကျစ်လစ်ဖို့ အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆို ယောင်းတို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်မလား????
Posted on January 3, 2019 January 3, 2019 Author Hnin Ei Oo
ဝိတ်ပါ တကယ်ကျစေမယ့် ကနည်း (၃)သွယ်
Posted on April 9, 2018 Author Hnin Ei Oo
အကလည်းဝါသနာပါ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ချင်တာ ဆိုတဲ့ယောင်းတို့အတွက် ဒီပိုစ့်လေးကအရမ်းအသုံးဝင်စေမှာပါ။